Saddle Up Uye Kukunda Muchikoro cheMabhiza Bitcoin Betting
Kuva iro zita guru mumhizha yekutengesa kwemitambo, Horse racing yakave imwe yeiyo Bitcoin sports yakabatanidzwa mumabhuku akawanda emitambo. Ngoro yebhasi Bitcoin kubheta nhasi ibasa rinonakidza kune vatengesi sezvavanotarisira pachitanga chekutanga chemhangemutange uye voona bhiza rava kutengesa pakutevedza. Ngoro yebhasi Bitcoin betting inoita kuti zvikwanise iwe kubheta chero iwe uri munyika.
Iyo inogadzirwa mumabhiza ebhiza yakanaka nyore kunzwisisa. Kuenda kune imwe nzvimbo, boka rejockeys pamabhiza avo anomhanyira sezvavanokwanisa. In Horse racing Bitcoin kubheta, vatambi vanogona kusarudza kubva pamhando dzakasiyana dzebhaji. Chinozivikanwa ndeye 'kukunda' umo vatengesi vanosarudza bhiza vanofunga kuti vachapedza kutanga. Imwe nzira yekubheja ndiyo 'nzvimbo' umo vatengesi vanofunga kuti hapana mabhiza ane mukana wakanakisisa wokukunda mutambo. Kana bhiza ravo rapedza kutanga kana rechipiri, vanokunda. Imwe ndeyo 'show' umo vatengesi vanofunga kuti bhiza ravo richapedza kutanga, rechipiri, kana chechitatu. 'Win' ine mubhadharo wepamusoro pakati pevatatu. Zvimwe pane aya makumbo, pane dzimwe dzakaoma zvakasiyana-siyana dzevashandi. Rimwe rayo ndi 'trifecta' apo vatengesi vanogona kutengesa pamabhiza ari kutanga kuwana, wechipiri, uye chechitatu panzvimbo chaiyo. Rimwe bhakisi rine ngozi ndeye 'superfecta'. Izvo zvakangofanana ne trifecta, nekuwedzera kwekufungidzirawo yechina kumapedza.
Kuti uite bheji, heya Horse racing Bitcoin betting tips iwe unogona kuwana hunobatsira. Yokutanga inosarudza kuremekedzwa kubheji nzvimbo iwe wakasununguka. Iyi inokosha. Pane zvakawanda mabhuku emitambo akavimbika kunze uko inopa Horse racing Bitcoin betting yakadai se: BetOnline, GTbets, NitrogenSports, Bovada, 1xBit, uye DirectBet. Kana iwe uchida kubheta paHuru racing Bitcoin betting chete, unogona kuedza DerbyJackpot. Ndiyo chete yeGhiza racing kutengesa iyo inogamuchira Bitcoin. Chimwe chirevo ndechokushandisa kusanganiswa kwemabheji akasiyana-siyana kuti ave nemikana yakawanda yekukunda. Uyewo, pane mamwe mazai emabhiza munyika yose kunze kwezviitiko zveU.S. Triple Crown, saka usapotsa. Uyezve, shandisa zvishoma mabhonasi Bitcoin zvinopa. Pakupedzisira, tarisa jockey uye fomu yebhiza. Ongorora maitiro avanoita nokuti izvi zvichabata mhinduro yemutambo.